Njengoba uyazi, iresiphi yebhin ye-hamburger "McDonald's" igcinwa ekusithekeni okuqinile kakhulu. Kodwa-ke, abanye abapheki bazama ukwenza isidlo esifanayo sokudla, besebenzisa lezi zithako ezihluke ngokuphelele. Namuhla sinikeza ukunaka kwakho indlela yokulungisa izinto ezithambile nezomnandi ezihloselwe ukudla okusheshayo.
Burger burger: iresiphi yokulungiselela okuningiliziwe
Izithako ezidingekayo zesisekelo:
Amanzi abilayo afudumele - 1.5 gr. I-Glass;
Amafutha omuncu fresh - ½ indebe;
Imvubelo esebenzayo eyomile - 1 isipuni esincane;
Ishukela leSand - izinkezo ezine ezinkulu;
Isisindo esiphakathi kosawoti - i-pinch engu-2;
I-margarine i-fresh or ibhotela - izinkezo ezintathu ezinkulu;
Ufulawa wokhula luhlungwa - izibuko ezigcwele ezingu-7 (kungaba okungaphezulu kakhulu);
Imbewu yeSesame - 20 g (ngomhlobiso).
I- Burger ye- hamburger, iresiphi elula kakhulu, iphuma enhle, elula futhi ehlwabusayo kuphela uma usebenzisa isisekelo semvubelo yokwenza umkhiqizo onjalo wofulawa. Ngakho-ke, kuyadingeka ukuba uhlanganise amanzi afudumele abilisiwe kanye namafutha amasha ubisi epanini elilodwa, bese uqeda ngokuphelele ushukela kuwo. Iningi elinjalo lomkhiqizo olahlekile kuyadingeka ukuze ngesikhathi sokucwenga kwezingqimba eziqediwe kahle, kufaka ubuso obushelelekile endaweni yokuxhumana ne-sauce, i-cutlet nezinye izithako.
Ngemuva kokuba ushukela uqothule ngokuphelele, kuyadingeka ukuthi uthele imvubelo eyomile ibe yingxube yobisi bese ulinda ukuba ivule ingxenye yesine yehora. Khona-ke, ngesisekelo kufanele senezelwe usawoti omncane wetafula kanye nofulawa obolweni osikiwe. Ngenxa yokuhlanganiswa ngokucophelela kwazo zonke izingxenye ngezandla, kufanele uthole inhlama eqinile. Ukuhlwanyela imbewu ye- sesame yama-hamburger ibe yindlala futhi isithambile, isisekelo kufanele siqiniseke ukuthi singamelana namaminithi angu-70-100 ekushiseni. Phakathi nalesi sikhathi, ubukhulu kufanele bukhuphuke izikhathi ezingu-2-3.
Ukwakhiwa kwemikhiqizo yefulawa
Uma ulandela ngokuqinile zonke izinyathelo ezingenhla ukuze uxove inhlama, khona-ke uzothola ibhande elithambile nelithenda lebhamburger. Iresiphi yalo mkhiqizo ihlanganisa imbewu ye-sesame. Noma kunjalo, kufanele isetshenziswe ngomzuzu wokugcina.
Ukwakha umkhiqizo onjalo kudingeka uthathe ucezu oluncane lwesembatho, ugobe ibhola elingamamitha ayi-5 ububanzi ukusuka kulo, bese ulubeka kancane bese ulibeka ebhodini lokubhaka, eliboshwe igargarini. Ngemuva kokuthi wonke amaqebelengwane afakwe emahhavini, kufanele ahlanganiswe nengqimba encane yebhotela elicibilikile futhi efafazwe ngembewu yesame.
Ama-buns akhiwe kufanele abhakwe kuhhavini ekushiseni kwama-degrees angu-185 ngamaminithi angu-25-29. Ngalesi sikhathi bazimisele ngokugcwele, bazoba ababucayi nabahle kakhulu.
Isigaba sokugcina ekulungiseleleni
I-Burger esilungele i-hamburger, iresiphi esiyibukeze ngenhla, akufanele igcwaliswe umculi ngesikhathi esisodwa. Ngaphambi kwalokho, kunconywa ukuba usike ngesigamu, bese uyifaka ngaphakathi ngaphakathi nebhotela. Futhi emva kwalokhu le nqubo kumkhiqizo ungakwazi ukubeka zonke izingxenye ezinomsoco futhi ezanelisayo, ezenzelwe ukudla okusheshayo.
Izinhlanzi zezinhlanzi ezinenhlanzi ekheniwe: kanjani ukupheka ngokushesha futhi okumnandi?
Indlela Thenga Da Hong Pao bese musa ukugijima ku-mbumbulu?
Umuthi 'Sydnopharm "- yokusetshenziswa. Tablets "Sydnopharm": analogs kanye nokubuyekeza
Kulula: ukupheka zucchini okuthosiwe
Esikhundleni isibonisi ku-iPhone 5: Imiyalelo